जापान मा १ Best सर्वश्रेष्ठ पैदल यात्रा स्थल! कामिकोची, ओज, माउंट फुजी, कुमानो कोडो, आदि - Best of Japan
कामिकाची, नागोनो, जापान = शटरसोकमा होटका पर्वत र कप्पा पुल
यदि तपाईं जापानको प्राकृतिक सुन्दर ठाउँहरू हिंड्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? यस पृष्ठमा, म १ 15 पैदल यात्रा स्थलहरूको परिचय दिनेछु। यो जस्तो १ 15 मा संकुचन गर्न लगभग असम्भव छ। जे होस्, यी १ sp स्पटहरू एकदम राम्रा छन्, त्यसैले कृपया यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने कृपया यसलाई पढ्नुहोस्। धेरै जसो १ sp स्थलहरूमा जान सजिलो तरीका छ। यद्यपि त्यहाँ केहि हार्ड कोर्सहरू पनि छन् जस्तै माउन्ट। फुजी र ओज कृपया तपाईको उद्देश्य अनुसार छनौट गर्नुहोस्।
शिरेटोको गोको ताल (होक्काइडो)
Oirase स्ट्रीम (Aomori प्रान्त)
ओज (गुन्मा प्रान्त)
नोकोगिरिमा (चिबा प्रान्त)
माउन्ट फुजी (शिजोओका प्रान्त, यामानशी प्रान्त)
कोयासन (वाकायामा प्रान्त)
माउन्ट मिसन (हीरोशिमा प्रान्त)
Takachiho घाटी (मियाजाकी प्रिफेक्टे)
याकुशिमा टापु (कागोशिमा प्रान्त)
Shiretoko राष्ट्रीय पार्क पूर्वी Hokkaido = shutterstock मा Shiretoko प्रायद्वीप मा स्थित
Shiretoko Goko झीलको नक्शा
होक्काइडोको पूर्वी भागमा त्यहाँ धेरै किसिमका प्रकृति रहेका छन्। विशेष गरी सुन्दर क्षेत्रहरू "Shiretoko राष्ट्रिय निकुञ्ज" को रूपमा सुरक्षित छन्। "Shiretoko Goko Lakes" यस राष्ट्रिय पार्कमा छ। यहाँ तपाईं रमाईलो पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
शिरेटोको गोको तालहरू शिरेटोको प्रायद्वीपको पहाडहरूको फेदमा फैलिएका छन्। कुमारी वनहरू त्यस्ता तालहरू नजिकै रहन्छन् जुन अलि विकसित भएको छैन। यस सुन्दर प्रकृतिमा नयाँ प्रोमोनेडहरू विकास हुँदैछ। त्यहाँ दुई प्रकारका बोर्डवक्सहरू छन्। एउटा आर्मी भूमि माथि माथि बढाइएको पैदल मार्ग हो। खैरो भालुहरू कहिले आउने छैनन् किनभने तिनीहरू उन्नत छन् र थप विद्युतीय बाड़हरू स्थापना गरिएका छन्। तपाईं शान्तिको साथ टहल्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुमारी जंगल भित्र एक बोर्डवाक छ। यहाँ खतरा छ कि खैरो भालु यहाँ आउँदैछ, त्यसैले समयको आधारमा यो गाइडसँग हिंड्नु पर्ने बाध्यता हो।
हालसालै, एउटा विशेष यात्रा शिरेटोको गोको तालहरूमा जाडोमा पनि शुरू भयो। यस निर्देशित भ्रमणका लागि आरक्षण एकदम आवश्यक छ।
जाडो विशेष यात्रा को लागी, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् यो पृष्ठ यो आधिकारिक वेबसाइट को।
माथी असहिदाकेको शीर्ष दृश्य (होक्काइडोको उच्च पर्वत, जापान)। यो Daisetsuzan राष्ट्रीय पार्क = शटरस्टकको उत्तरी भागमा अवस्थित छ
Daisetsuzan को नक्शा
डेइसेटुजान (जसलाई टेसेट्सुजान पनि भनिन्छ) होक्काइडोको बीचमा रहेको विशाल हिमाली क्षेत्र हो। त्यहाँ धेरै पर्वतहरू छन् जुन २००० मीटर जति उचाईको साथ माउन्ट। Asahidake (उचाई २२ 2000 १ मी) र माउन्ट। कुरोडके (१ 2291 m 1984 मी) यहाँ तपाईं जुन देखि अक्टूबर सम्म पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ दुई पाठ्यक्रमहरू छन् जुन मैले पहिलो व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दछु। दुबै रोपवे प्रयोग गर्दै छन् र उच्च हिमाल पर्वतारोहणको आनन्द लिइरहेका छन्।
सबैभन्दा लोकप्रिय कुरोडेक रोपवे प्रयोग गर्ने कोर्स हो। यो रोपवे होउकाइडोको सबैभन्दा पहिलेको स्पा शहर, साउन्कोयो गोर्जेबाट माउन्टमा जोड्दछ। कुरोडके K मिनेटमा 5th औं स्टप। थप रूपमा, एक जोडी लिफ्ट माउन्ट गर्न संचालित हुन्छ। कुरोडके 7th औं रेखा (१7२० मीटर) यो पहाडको शीर्षमा लिफ्टको अन्तिम बिन्दुबाट लगभग १ घण्टा 1520० मिनेट पैदल छ। हरेक वर्ष जुलाईको सुरू देखि अगस्टको मध्यसम्म तपाईं सुन्दर अल्पाइन बोटबिरुवाको फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
अर्को पाठ्यक्रम माउ.असेहिदाके रोपवे प्रयोग गर्नु हो, डेइसेटुजानको उच्च शिखर। यो रोपवे माटोको पाउमा Asahidake Onsen (११०० मीटर) बाट सम्बन्ध छ। Asahidake to Mt.Asahidake को th औं स्टप (१ m०० मिटर) १० मिनेटमा। अन्तिम बिन्दुबाट, सुगतामी पोखरी भनिने सुन्दर पोखरीमा हिंड्ने मार्ग विकसित हुँदैछ। एउटा गोद करीव १.1100 किमी छ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु विशेष गरी डेसेट्सुजानको यो सुगातामी पोखरीमा।
>> Daisetsuzan राष्ट्रीय पार्क को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
म तल शरद leavesतु पातमा लेखमा डाइजेट्सुजन पनि परिचय गर्दछु।
ताजा हरियो = शटरस्टकको Oirase स्ट्रिम
Oirase स्ट्रिम को नक्शा
Oirase धारा Aomori प्रान्त मा Towada ताल देखि शुरू एक हिमाली धारा हो। मैले ओराइज स्ट्रिमको बारे मा माथिल्लो लेख मा शरद पात र Disetsuzan मा पहिले नै उल्लेख गरेको छु, त्यसैले विवरणको लागि माथिको लेख हेर्नुहोस्। Oirase स्ट्रिम Towada ताल देखि लगभग १ kilometers किलोमिटर को लागी एक साँच्चै अद्भुत वन र पानी संसार बनाउँछ। शरद पातहरूको समय बाहेक, ताजा हरियो वसन्तमा पनि राम्रो छ। म दृढताका साथ Oirase स्ट्रिमलाई पैदल यात्रा स्थलको रूपमा सिफारिस गर्दछु।
>> Oirase धारा को विवरण को लागी, कृपया यो साइट हेर्नुहोस्
ओजमा, सेतो स्कंक गोभीका फूलहरूले तपाईंलाई वसन्त = शटरस्टकमा स्वागत गर्नेछन्
ओज राष्ट्रिय निकुञ्ज शरद ,तुमा, जापान = शटरस्टक
Oze को नक्शा
ओज टोकियोको १ 150० किलोमिटर उत्तरमा राष्ट्रिय पार्क हो। यदि तपाईं पास पार गर्नुभयो र ओजमा पुग्नुभयो भने, तपाईं पक्कै पनि यसको सुन्दरता देखेर चकित हुनुहुनेछ। यो एक पठार हो (१,1,400०० मिटरको उचाई) २००० मिटर उचाईमा पर्वतहरू घेरेर बन्द गरिएको छ। त्यहाँ मानव द्वारा निर्मित कुनै भवनहरू छैनन्, वाकई वे बाहेक सेटअप गरिएको थियो ताकि मानवहरू सिधा जमिनमा सिधा नपुगोस्। माथिको फोटोमा जस्तो, वसन्त inतुमा, शुद्ध सेतो स्कंक बन्दकोबीको फूल खिल्यो। गर्मीमा, पहेंलो फूलहरूले निक्को किसोज पठाउँछन्। र शरद inतुमा शानदार शरद leavesतु पातले दोस्रो चित्रमा देखाइए जस्तै पठारलाई छोप्छ। ओज यस्तो विश्व हो जहाँ दृश्यहरू सुन्दर ढ the्गले चार asonsतुहरूको परिवर्तनद्वारा परिवर्तन हुन्छन्।
जो पहिलो पटक ओजमा जान्छन्, पासोबाट हाटोमाची-टोजबाट प्रवेश गर्नु सामान्य कुरा हो। पहिले तपाईं सुन्दर बीच बीचमा हिंड्नुहुनेछ र केहि समयको लागि अगाडि बढ्नुहुनेछ। त्यसपछि एक विशाल वेटलैंड अन्ततः तपाइँको सामने देखा पर्दछ। आर्द्र भूमिमा हिंड्नुहोस् र त्यहाँ तस्वीर लिनुहोस्। त्यसोभए तपाईं झोपडीमा ब्रेक लिनुहुनेछ र अन्तमा हातोमाची-टोजमा फर्कनुहुनेछ। यो मार्ग जम्मा १ 15 किलोमिटर छ, आवश्यक समय about घण्टाको लागि। उचाई फरक लगभग २०० मीटर छ।
>> Oze को विवरणको लागि, कृपया यो साइट हेर्नुहोस्
चिबा प्रान्तमा नोकोगिरिमा पहाड, जापान = शटरस्टक
नोकोगिरिमा (सावतीथको पर्वत) टोकियोको पश्चिममा बोसो प्रायद्वीपमा 329२ meters मिटर उचाईको पहाड हो। यो पहाड उचाई मा उच्च छैन, तर त्यहाँ एक वेधशाला अडान छ "Jigokunozoki (नरक हेर्न को लागी एक स्थान को अर्थ)" समुद्रमा टाँसिएको। त्यहाँबाट तल हेर्दा यो एकदमै रोमाञ्चक हुन्छ।
यो पूरै पहाड निहुन्डेरा मन्दिरको छेउमा छ र त्यहाँ ठूला बुद्ध मूर्तिहरू पनि छन्। थप रूपमा, यस पहाडबाट धेरै वर्षहरूमा धेरै ढु stones्गाहरू काटिएका थिए। अहिले पनि त्यहाँ ढु walls्गा काट्न ठाडो भित्ताहरू छन्। यी कारणहरूले गर्दा, नोकोगिरिमा हालका बर्षहरूमा विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा एक अत्यन्तै अनौंठो पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा परिचित भएको छ।
तपाईं कारबाट पहाडको शीर्षमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि रोपवेबाट आधा बाटोमा जान सक्नुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाईं फिटनेस व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं खुट्टाबाट शिखरमा जानुहोस्। यस पहाडमा चढ्न धेरै मार्गहरू छन्। कृपया जाँदा र फर्केर मार्ग परिवर्तन गर्नुहोस्, निहोंडेरा मन्दिरको बुद्ध मूर्तिहरू अवलोकन गर्दै, ढु stone्गा काटिएको ट्रेसहरूमा जानुहोस् र यस कोणको विभिन्न कोणबाट आनन्द लिनुहोस्।
यसको लागि एक घण्टा लाग्छ नोकोगिरिमाको खुट्टाबाट शिखरमा जान। यद्यपि उचाइ उच्च छैन, यो एकदम गाह्रो छ किनकि त्यहाँ धेरै सीढीहरू र ढलानहरू छन् जुन द्रुत रूपमा ग्रेडिंग गर्दैछ। शिखरबाट तपाई टोकियो खाडी र माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फुजी जहाँसम्म, Jigokunozoki बाट यस्तो दृश्य हेर्नको लागि, तपाईले लाइन अप गर्नु पर्ने हुन्छ। हामी भीडलाई विचार गरेर खाली समय खर्च गरौं।
व्यक्ति माउन्ट टाकाओ (टाकाओ सैन), टोक्यो, जापान = शटरस्टकमा पदयात्रा गर्दै
Mt.Takao को नक्शा
माउन्ट टाकाओa599 meters मिटर उचाई भएको टोकियो केन्द्रबाट 50० किलोमिटर पश्चिममा हिमाल हो। यद्यपि उचाइ उच्च छैन, यो पहाडको रूपमा धेरै लोकप्रिय छ जहाँ तपाईं सजिलै शहरको क्षेत्रबाट जान सक्नुहुन्छ, र पर्वतारोहणको संख्या प्रति वर्ष २2.6 लाख reaches० हजारसम्म पुग्छ। यो भनिन्छ कि माउन्ट। टाकाओ हिमाल हो जुन विश्वमा माउन्टेनरको संख्या धेरै छ।
माउन्टमा जानको लागि टाकाओ, तपाईंले टोक्योको शिन्जुकु स्टेशनबाट केियो लाइनमा बोर्ड गर्नु पर्छ। टाकाओसang्गची स्टेशनको लागि यो लगभग minutes० मिनेटको केयो लाइनमा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा हुन्छ। त्यहाँ माउन्ट छ। टाकोसang्गच स्टेशनबाट foot मिनेट पैदल टाकाओको आरोहण मुख। यो यहाँबाट शिखरको लागि १ घण्टा 50० मिनेट जति छ। यद्यपि माउन्ट टाकाओसँग केबल कार र लिफ्टहरू पनि छन्। तपाईं केबल कार वा लिफ्ट प्रयोग गरी लगभग51० मिटरको उचाईमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं यो मार्ग जानुभयो भने, तपाईं एक घण्टामा खुट्टाबाट शिखरमा जान सक्नुहुन्छ।
सडक वरिपरि विशाल रूखहरू छन्। पहाडको टुप्पोमा याकुओ-ईन भनिने मन्दिर छ। माउन्ट टाकोओलाई लामो समयदेखि यस मन्दिरमा केन्द्रित पवित्र स्थानको रूपमा लिइन्छ। याकुओ-इनमा टे Ten्गू भन्ने राक्षसहरूका मूर्तिहरू छन्। तेg्गसले यस मन्दिर र हिमालहरूको रक्षा गर्दैछ। माउंट को शिखर। टाकाओ एक वर्ग हो। शिखरबाट तपाई टोकियो शहरको केन्द्र देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मौसम राम्रो छ, तपाईं माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फुजी
माउन्टको खुट्टामा टाकाओ त्यहाँ धेरै स्मारिका पसल र रेष्टुरेन्टहरू छन्। विभिन्न प्रकारका जापानी शैलीको मिठाईहरू बेचिन्छ र धेरै मानिसहरूसँग भीड। माउन्ट टाकाओ मिचेलिन गाइडमा तीन तारा प्राप्त गर्दछ, त्यसैले यो धेरै भीडको छ विशेष गरी वसन्त र शरद .तुमा। केबल कारमा जान तपाईले लामो समय सम्म लाइन लगाउनुपर्नेछ। यदि सम्भव छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं एक अपेक्षाकृत सित्तैमा जानुहोस्।
>> विवरणका लागि आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
माउन्टमा चढ्ने फुजी जुलाई को शुरुदेखि सेप्टेम्बर बीचमा सीमित छ। यस अवधिमा एक आँधीले कहिलेकाँही आक्रमण गर्दछ, तर यदि यो घाम लाग्छ भने, तपाईं पहाड चढ्ने मार्गबाट ​​पहाडको शिखरमा जान सक्नुहुन्छ। आरोहण मार्गहरू लगभग दक्षिणमा Shizuoka प्रान्त पक्ष र उत्तरमा Yamanashi प्रान्त क्षेत्र मा विभाजित गर्न सकिन्छ। शुरुआतीहरूको लागि सिफारिश गरिएको सब भन्दा साधारण मार्ग भनेको योमानशी प्रान्तको योशिदा मार्ग हो। यदि तपाईं योशिदा मार्ग प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो शिखर मा station स्टेशन बाट लगभग hours घण्टा लाग्नेछ। डाउनहिल करिब hours घण्टा हो। यस मार्गमा त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा धेरै पसलहरू र पहाडहरू छन्।
यदि तपाईं माउन्ट फुजीमा चढ्नुभयो भने, म तपाईंलाई दृढताका साथ सिफारिश गर्दछु कि तपाईं बाटोमा हिमालको कुण्डमा निप्पड लिनुहोस् र राती अब फेरि चढाई सुरु गर्नुहोस्। त्यसोभए शिखरमा तपाईले उत्तम सूर्योदय हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले बिहानको सूर्यास्त शिखरमा देखेको छु। यो बिहानी सूर्य धेरै सुन्दर छ, यो एक अद्भुत स्मृति हुनु पर्छ।
पर्वतारोहण माउन्ट। फुजी माउण्ट पर्वतारोहण भन्दा एकदम फरक छ। टाकाओ माथिको। माउन्ट फुजीको उचाई 3776 XNUMX मिटर छ। चढाई शुरुवातकर्ताहरू पनि चढ्न सकी रहेका छन् आरोहण सडक कायम छ, तर यो पर्वतारोहण धेरै गाह्रो छ। यसबाहेक, यो गर्मी मा शिखर नजिकै चिसो छ। कृपया अग्रिम धेरै जानकारी जम्मा गर्नुहोस् र दृढतापूर्वक तयार गर्नुहोस्।
कृपया तलको लेखलाई पनि सन्दर्भ गर्नुहोस्।
उत्तरी जापानको कामानोची राष्ट्रिय निकुञ्ज नागानो प्रान्त, जापानको आल्प्स। नदी = शटरस्टकको साथ शरद पातमा सुन्दर पहाड
Kamikochi को नक्शा
यस पृष्ठको सुरूमा रहेको चित्र कामिकोचीको दृश्य हो।
कामिकोची १,1,500०० मिटर उचाई भएको मैदान हो र पहाडहरूले यसलाई अँगालेको छ जुन नागानो प्रान्तको पश्चिमी भागमा 3000००० मिटरको उचाईमा छ।
यस मैदानको चौडाई १ किलोमिटर छ र लगभग १० किलोमिटर लम्बाइ सुन्दर Azusa नदीको प्रवाहको साथ छ। कमिकोचीको बीचमा, "काप्पा ब्रिज" नामको काठको सस्पेंशन ब्रिज छ, र कप्पा पुलको साथ अजुसा नदीको दृश्य लोकप्रिय छ।
यस मैदानमा धेरै हिड्ने सडकहरू छन्। यो साधारण गाडीको लागि Kamikochi प्रवेश गर्न अनुमति छैन, हिड्ने बाटो अचम्मको शान्त र सुन्दर छ। यस्तो देखिन्छ कि वरपरका पहाडहरू एकदमै ठाडो छन् र चित्रहरूको रूपमा आएको जस्तो। Azusagawa अविश्वसनीय स्पष्ट छ। सेतो बर्च जस्तो एक रहस्यमय जंगल नदीको चारैतिर फैलियो।
कामिकोचीमा तपाई अप्रिल २th देखि नोभेम्बर १th सम्म प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, सामान्य सवारी सवारी साधनहरूको अनुमति छैन, तपाईं बस वा ट्याक्सीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ Kamikochi निकट धेरै पार्किंग स्थलहरूमा। कामिकोचीको लागि सीधी बसहरू जेआर मत्सुमोोटो स्टेशन र मत्सुमोोटो इलेक्ट्रिक रेलवे शिन-शिमाशिमा स्टेशनबाट सञ्चालित छन्। Kamikochi गर्मी मा चिसो छ र एक गर्मी रिसोर्ट को रूप मा रहनको लागि उत्तम ठाउँ हो। जाडो महिनाहरूमा नोभेम्बर १ after पछि, तापमान एकदम कम छ र यसलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ किनभने त्यहाँ धेरै हिउँ परेको छ।
कमिकोचीमा केहि प्रसिद्ध होटलहरू छन्। ती मध्ये कामिकोची इम्पीरियल होटेल जापानको प्रतिनिधि रिजोर्ट होटेल हो र आरक्षण गर्न गाह्रो छ। यदि तपाईं कामिकोचीमा जानुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं सकेसम्म चाँडो तयारी गर्नुहोस्।
कामिकोचीको लागि कृपया तलको सुन्दर फोटो सुविधा हेर्नुहोस्।
यदि कसैले मलाई सोध्यो भने, "जापानको पर्वतीय क्षेत्रमा सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ कहाँ छ?" म तुरून्त "यो कामिकोची (नागानो प्रान्त) हो" भन्नेछु। कामिकोचीको सुन्दरता फोटो वा भिडियोमा धेरै व्यक्त गर्न सकिदैन। Kamikochi मा, त्यहाँ जापान मा उत्तम रिसोर्ट होटल, Kamikochi हो ...
>> Kamikochi इम्पीरियल होटल को आधिकारिक साइट यहाँ छ
यदि तपाईं Fushimi Inari Taisha Shrine को शिखरमा चढ्नुभयो भने, तपाईंले क्योटो शहर देख्न सक्नुहुनेछ
फुशिमिनारी ताइशा तीर्थको नक्शा
क्योटो शहरको दक्षिणमा अवस्थित विदेशी पर्यटकहरूमा फुशमी इनारी ताइशा तीर्थ सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हो। यो मन्दिर २ M233 मिटरको उचाईमा माउन्ट इन्नारीको शिखरमा फैलिन्छ। यदि तपाईं यस सम्पूर्ण मन्दिरको भ्रमण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाईं एउटा पहाडमा चढ्नुहुनेछ। पहाडको टुप्पोबाट तपाईं क्योटो शहरमा देख्न सक्नुहुन्छ। साँझमा, तपाइँ परम्परागत शहरको अद्भुत सूर्यास्त परिदृश्य देख्न सक्नुहुन्छ।
Fushimi Inari Taisha Shrine मा १०,००० रातो तोरी छन्। तपाईं यी तोरीको मुनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि यो धेरै जापानी शैली को पैदल यात्रा हो। यसले लगभग १ घण्टा 10,000० मिनेट खुट्टाबाट माउंट इन्नारीको शीर्षमा लिन्छ। ब्रेक सहित, राउन्ड ट्रिपको लागि यसले 1 घण्टा लिन सक्दछ।
माथिको वरपर, सीढ़ी एकदम ठाडो ढलानको साथ जारी छ। यदि तपाईं बच्चा वा जेष्ठ नागरिकसँग जानुहुन्छ भने, पछाडि जानु उत्तम हो र यसलाई अधिक नबनाउनुहोस्।
रातो परम्परागत लाइट पोल पोल, जापानको क्योटो = शटरस्टकमा
Kifune को नक्शा
किफुन क्योटो स्टेशनको उत्तरमा करिब २० किलोमिटर उत्तरमा छ र यो क्योटोको बाहिरी इलाकामा कुरमा र ओहारा नजिकैको दर्शनीय स्थलको रूपमा लोकप्रिय छ।
किफ्यून क्योटोको सांस्कृतिक वातावरण र एकै समयमा जापानको सुन्दर प्रकृतिबाट आनन्द लिनको लागि महत्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहाँ एक सुन्दर किफ्यून तीर्थ छ जसलाई माउ किफुने र माउण्ट कुरमा बीचको साँघुरो उपत्यकामा छ। यो मन्दिरको भ्रमण गर्ने क्रममा तपाई किन हाइक गर्नुहुन्न?
किफ्यून तीर्थ शरद leavesतु पातहरूको एक स्मारकको रूपमा परिचित छ। मन्दिरको प्रवेशद्वारमा माथिल्लो फोटो जस्तो लामो सिढी छ। जस्तो कि रातो रंगको परम्परागत प्रकाश पोलहरू तपाईंको वरिपरि कतारबद्ध छन्, तपाईं सुन्दर फोटो लिन सक्षम हुनु पर्छ। यो सीढी हिउँदमा हिउँ संग शुद्ध सेतो हुन्छ, एक पवित्र वातावरण दिन्छ।
किफुन मन्दिरको लागि आइजान रेलवेको किफुलेगुची स्टेशनबाट 30० मिनेट पैदल छ। किनकि बस मन्दिरको नजिकै अपरेट गरिएको छ, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। किफ्यून तीर्थको छेउमा, म कुरमा र ओहाराको मन्दिर र मन्दिरहरूमा जान सिफारिस गर्दछु।
कुमानो नाची ताइशा भव्य तीर्थको नक्शा
कुमानो कोडो पुरानो तीर्थयात्रा मार्गहरू हुन् जुन कुमानोका तीन भव्य तीर्थ स्थानहरू (कुमानो हयाटामा ताइशा भव्य तीर्थ, कुमानो होंगु ताइशा भव्य तीर्थ र कुमानो नाची ताइशा भव्य तीर्थ) हो। त्यहाँ धेरै Kumano Kodo Kii प्रायद्वीप, होन्शु को सबैभन्दा ठूलो प्रायद्वीप हो। प्रत्येक सडक रहस्यमय वातावरणले भरिएको हुन्छ। किन तपाईं यी पुरानो सडकहरू हिड्नुहुन्न?
जापानमा यो प्राचीन काल देखि कुमानो को तीन भव्य मंदिरहरु को भ्रमण गर्न व्यापक छ। आधुनिक युगमा यी तीर्थस्थलहरूको पूजा गर्ने प्रथा सम्राट र कुलीनहरूले मात्र होइन तर साधारण मानिसहरूले पनि लिएका थिए। धेरै तीर्थयात्रा मार्गहरू यस तरीकाले तयार पारिएका थिए। जे होस्, २० औं शताब्दीको सुरूदेखि नै यस चलनलाई परित्याग गरियो र कुमानो कोडोलाई पनि बिर्सियो। यद्यपि केहि कुमानो कोडो अझै पनि स्थानीयहरूका लागि जीवित सडकको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
कुमानो कोडो २०० 2004 मा युनेस्कोको विश्व धरोहरको रूपमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि जापानमा कुमानो कोडोलाई बचाउने गतिविधिहरू बृद्धि भइरहेको छ। धेरै दर्शनीय गाईड पुस्तकहरूमा, कुमानो कोडो प्रस्तुत गरिएको छ। मलाई लाग्छ कि तपाइँ कुमानो कोडोको बारेमा अधिक जानकारी इन्टरनेटमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, साइटमा निर्भर गर्दै, कुमानो कोडोको केवल एक अंश प्रस्तुत गरिएको छ। यो किनभने स्थानीय नगरपालिका र पर्यटन पदोन्नति समूहहरू आदि आफ्नो क्षेत्र मा कुमानो कोडो को धेरै परिचय। त्यसो भए कृपया यस बारे सावधान रहनुहोस् र विश्वव्यापी रूपमा सूचना संकलन गर्नुहोस्।
यदि तपाईं कुमानो कोडो हिंड्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं कुमानोको तीनवटा भव्य तीर्थहरू, ती मार्गहरूको गन्तव्यहरूको बारेमा पनि जानकारी संकलन गर्नुहोस्। यी तीन पुराना मठहरू धेरै आकर्षक छन्। त्यसकारण, मलाई लाग्छ कि यो उत्तम यात्रा हो जब तपाईं यात्रा सेट गर्नुहुन्छ जुन यी तीर्थ स्थानहरूका साथै कुमानो कोडोमा जान्छ।
स्थानीय व्यक्ति माउन्टमा Okunoin कब्रिस्तानको भ्रमण गर्छन्। कोया (कोयासन) वाकायामा, जापान = शटरस्टकमा
कोयासन वाकायामा प्रान्तको उत्तरी भागमा अवस्थित छ, पहाडले घेरिएको meters ०० मिटर उचाई भएको बेसिन। 900th औं शताब्दीमा, प्रख्यात भिक्षु कुकाई (यसलाई कोबो डेइशी पनि भनिन्छ) ले यो बेसिनलाई बौद्ध धर्मको लागि पवित्र स्थान बनायो। कोयोसोनमा हाल १२० मन्दिरहरू छन्, को Kong्गबुजी मन्दिरमा केन्द्रित छन्। कोयासन २००9मा युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा चयन गरिएको थियो।
कोयासनमा धेरै ठाउँहरू छन्, कोन्कोबुजी मन्दिरबाट सुरू। यद्यपि कोयासन धेरै फराकिलो छ, र यी दृश्यहरू kilometers किलोमिटर पूर्व-पश्चिम र २ किलोमिटर उत्तर र दक्षिणको क्षेत्रमा डटेड छन्। किन तपाईं यी ठूला ठाउँहरू वरिपरि ठूला रूखहरूको साथ लाइनमा हिंडेर हिंड्नुहुन्न?
कोयासनमा, तपाईं पहिले ओसाकाको नाम्बा स्टेशनबाट निकटको गोकुराकु-बाशी स्टेशन जान नानकई रेलवेको सीमित एक्सप्रेसबाट जानुहुन्छ। यात्रामा करीव 90 ० मिनेट लाग्छ। अर्को तपाइँ केबल कार द्वारा कोयासन स्टेशन जानुहुनेछ। यात्रा समय minutes मिनेट छ। कोयासन को भित्री भाग एकदम फराकिलो छ, त्यसैले बस परिक्रमा गरिरहेको छ। कोयासन स्टेशनबाट, यो बस लिनुहोस् र तपाईंको गन्तव्यमा पुग्नुहोस्।
यस बेसिनको वरिपरि कोयासन पुग्न धेरै पुराना सडकहरू छन्। यदि तपाईं वास्तविक पैदल यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो राम्रो हुनेछ कोयासन तर्फ यी पुराना सडकहरूमा हिंड्न। सामान्य पुरानो सडकहरू "चौइशी-मिची" र "कुरोको-मिचि" हुन्।
Mt.Misen, मियाजीमा को नक्शा
हिरोशिमा शहरको लगभग २० किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा मियाजीमा टापु छ। मियाजीमा टापु एक सानो टापु हो जुन लगभग km० किमी / एल छ।
यस टापुमा इट्सुकुशिमा तीर्थस्थल युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा दर्ता गरिएको छ। र यसको पछाडिको पहाड माउन्ट हो। Misen (level 535 मिटर समुद्र सतह माथि)।
माउन्ट मिसेनले मिशेलिन गाइडमा इट्सुकुशिमा तीर्थका साथ तीन तारे जितेको छ। माउन्टको अवलोकन डेकबाट मिसेन तपाई वरपरको समुद्रहरु र शिकोको पहाडहरु अन्तमा देख्न सक्नुहुन्छ। दृश्य साँच्चै अद्भुत छ।
त्यहाँ माउन्टको तीन आरोहण मार्गहरू छन्। Misen तपाई माथि चढ्न सक्नुहुन्छ २ घण्टा भित्र जुनसुकै तरिका तपाई पार गर्नुहोस्। माउन्टमा मिसन त्यहाँ एक रोपवे छ र तपाईं माउन्टको बीचमा जान सक्नुहुन्छ। रोपवेद्वारा मिसिएको। जे होस्, भीडका दिनहरू जस्तै सप्ताहन्तहरूमा, कहिलेकाँही रोपवेमा जान 2० मिनेट जति हुन्छ। यदि तपाईं स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यो खुट्टाबाट पैदल हिँड्न सजिलो हुन्छ।
>> विवरणका लागि, कृपया यो सम्बन्धित साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
मनाई फल्स - जापानको श्राइन, ताकाचीहो कवच = शटरस्टक
ताकाचीहो कवचसँगै, लगभग १ किलोमिटर प्रोमेनेड = शटरस्टक विकसित भइरहेको छ
ताकाचीहो कवच पूर्वी क्युशुको प्रख्यात दर्शनीय स्थल हो। यस क्षेत्रबाट बग्ने गोगासे नदीले लाभालाई लामो समयसम्म खोलेर गहिरो उपत्यका बनायो। -80०-१०० मिटर उचाईको चट्टान 100 किलोमिटरसम्म रहन्छ। धेरै झरनाहरू चट्टानबाट बगिरहेको छ। तपाईं झरना सम्म डु boat्गा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ।
यस उपत्यकामा त्यहाँ लगभग १ कि.मि. यस झरनाको नजिकै पार्कि lotमा कार पार्क गरौं र यो प्रमनेडमा हिंडौं। रूखहरू गहिरो हरियो छन्, शरद पातहरू सुन्दर छन्। झरना को आवाज राम्रो लाग्छ। तपाईं बोर्डवाकको अन्त्यबाट फिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं नजिकको ताकाचीहो शिन्टो मन्दिरमा जान सक्नुहुन्छ।
Takachiho जापानी मिथक को गृहनगर हो भनिन्छ। यहाँ राम्रा टेरेस धान क्षेत्रहरू छन्। किन तपाईं यस्तो Takachiho वरिपरि एक पैदल ले र ताजा छैन?
याकुसुगी याकुशिमा जापान = शटरस्टक
याकुशिमा टापु क्युशुको 60० किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ। लगभग २ kilometers किलोमिटर पूर्व-पश्चिम र करिब २ 28 किलोमिटर उत्तर-दक्षिणको गोलाकार टापु, टापुको% ०% जंगलले ढाकिएको छ। यो टापु यसको धेरै "याकुसुगी" देवदार रूखहरूको लागि १००० बर्ष भन्दा पुरानो प्रख्यात छ। याकुसुगी आदि जंगल युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा दर्ता छन्।
याकुशिमा साँच्चै वन्य टापु हो। प्राय: यस टापुका सबै पहाडी क्षेत्र हो, पहाडहरू उचाई १,००० देखि १,। ०० मिटरसम्मका छन्। वार्षिक वर्षा समुद्री तटमा 1,000 1,900०० मिमी र हिमाली क्षेत्रहरूमा १००००० मिलिमिटर हुन्छ। यो वर्षा झरना र नदी बन्छ, पहाडहरू काट्छ र गहिरो उपत्यका बनाउँछ। म हरेक दिन भारी वर्षाबाट अचम्मित भएँ जब म यकुशिमा गएँ। मलाई लाग्यो कि किंग क King्ग देखा पर्नेछ।
याकुशिमाको सबैभन्दा ठूलो देवदार एउटा गोदमा १ 16 मिटरको दूरीमा छ र यसलाई "जोमोन-सुगी" भनिन्छ। जापानमा हामी ढु the्गा युगलाई "जोमोन युग" भन्छौं। यो देवदारको रूख यसको नामकरण गरिएको छ किनकि यसको उमेर 3000००० बर्ष भन्दा बढी छ। तपाईं यस देवदारलाई हेर्न यकुशिमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यात्रामा लगभग ११ घण्टा लाग्छ। यद्यपि यो गाह्रो यात्रा हो, यद्यपि टूरमा भाग लिने व्यक्तिहरूको सन्तुष्टि स्तर अत्यन्त उच्च छ।
याकुशिमा टापुको विवरणहरूको लागि कृपया तलका साइटहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> याकुशिमा: एक आगन्तुक गाइड
>> हो! याकुशिमा